ओक्लाहोमा WIC | JPMA, Inc.
हामी तपाइँ र तपाइँको परिवारलाई ओक्लाहोमा WIC कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौं। के तपाईंलाई किनमेल सहयोग चाहिन्छ? कृपया हामीलाई कल गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग डायल गरेर कुनै प्रश्नहरू छन् भने: 405-549-3291 २//24 यदि तपाईंलाई स्तनपान सहायता चाहिएको छ भने, कृपया ओक्लाहोमा स्तनपान गर्ने हॉटलाइनमा कल गर्नुहोस् १-1-२877१-मिल्क (6455) तपाईं यो नम्बर २ 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ स्तनपान समर्थन प्राप्त गर्नका लागि नर्सि mothers आमाहरू, तिनीहरूका परिवारहरू, साझेदारहरू, सम्भाव्य आमाबाबु, र स्वास्थ्य पेशेवरहरूको लागि। सबै कलहरू एक अन्तर्राष्ट्रिय बोर्ड प्रमाणित Lactation परामर्शदाता (IBCLC) द्वारा फिर्ता। तपाईं हाम्रो पनि पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ भर्चुअल प्रसवपूर्व बैग संसाधन यहाँ.
तपाईं WIC मा नयाँ हुनुहुन्छ? ओक्लाहोमा हेर्नुहोस् WIC शपिंग सल्लाह भिडियो तल!
ओक्लाहोमा WIC शपिंग सल्लाह भिडियो
WIC शपिंग सल्लाह भिडियो
Q: के मैले मेरा सबै WIC फूडहरू (खानाहरू र सूत्रहरू) पाउनु पर्छ?
A: तपाईंले एकपटकमा तपाईंको सबै WIC सुविधाहरू (फूड्स र फार्मूला) रिडिम गर्नु आवश्यक पर्दैन। तपाइँ कम वा र WIC सुविधाहरू (खाद्यान्न र सूत्र) तपाईलाई तोकिएको कुनै पनि रिडिम गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
A: तपाईंको WIC क्लिनिकमा WIC सुविधाहरूमा कुनै परिवर्तनको लागि विकल्पहरू छलफल गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। स्टोरमा कुनै प्रतिस्थापन गर्न सकिदैन।
Q: के म मेरो बच्चा वा मेरो WIC सुविधाहरू (खानाहरू र सूत्रहरू) मेरो परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुवाउन सक्छु?
A: WIC बेनिफिट्स (फूड्स र फार्मुला) केवल व्यक्तिको लागि मात्र हो जसलाई WIC बेनिफिट्स (खाद्यान्न र सुत्र) तोकिन्छ। यदि तपाईंको घरमा WIC सुविधाहरू (खाद्य पदार्थ र सुत्र) प्राप्त गर्दैछ भने निश्चित WIC- उपलब्ध खाना खाँदैनन्, या त स्टोरमा नपाउँनुहोस् वा WIC क्लिनिक स्टाफलाई तपाईंको निर्धारित WIC सुविधाहरू (फूड्स र फार्मूला) बाट हटाउन अनुरोध गर्नुहोस्। ।
A: तपाइँलाई उपलब्ध विकल्पहरू छलफल गर्न तपाइँको WIC क्लिनिक सम्पर्क गर्नुहोस्।
Q: के मेरो WIC लाभहरू (फूड्स र फार्मूला) आउँदो महिनामा तिनीहरू प्रयोग छैन भने?
A: होइन। कुनै पनि WIC सुविधाहरू (खाद्य पदार्थ र सुत्र) किनेका छैनन् जुन त्यो महिनामा हुन्छ छैन अर्को महिनामा बोक्नुहोस्।
WICShopper अनुप्रयोगमा उत्पादनहरू स्क्यान गर्नुहोस् तिनीहरू पक्का छन् कि तिनीहरू ओक्लाहोमा WIC- योग्य छन्। तपाइँको eWIC कार्डमा खरीद गर्नु भन्दा पहिले तपाइँको WIC सुविधाहरू (फूडहरू र सुत्र) छन् भनेर प्रमाणित गर्न नबिर्सनुहोस्!
WICShopper (वा तपाइँको छापिएको संस्करण) मा तपाइँको ओक्लाहोमा WIC स्वीकृत फूड सूची (AFL) हेर्नुहोस् WIC बेनिफिट्स (खाद्य पदार्थ र सूत्र) किन्न सक्नुहुन्छ।
अनुमति - यो वस्तु ओक्लाहोमा WIC को लागी अनुमति छ! एउटा कुरा जान्नको लागि तपाईले कुनै वस्तुलाई अनुमति दिईएको हुनसक्दछ, तर यो तपाईंको WIC बेनिफिट्स (फूड्स र फार्मूला) को अंश होइन, त्यसैले तपाईं यसलाई WIC सँग खरीद गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरणको लागि, दुई बर्ष भन्दा कम उमेरको बच्चाले उनीहरूको WIC सुविधाहरूमा सम्पूर्ण दुध प्राप्त गर्नेछ। यदि तपाईंको बच्चा दुई बर्ष वा बढी उमेरको छ भने, पूरै दुध तपाईंको WIC सुविधाहरूको अंश हुँदैन, र तपाईं रजिस्टरमा सम्पूर्ण दूध किन्न सक्षम हुनुहुने छैन। WIC सुविधाहरू (खाद्य पदार्थ र सूत्र) WICShopper अनुप्रयोगमा लिंक नभएसम्म, यो "अनुमति दिईएको" सन्देश तपाईंको परिवारको WIC सुविधाहरू (खाद्य पदार्थ र सूत्र) लाई लागू हुँदैन।
WIC वस्तु होइन - यसको मतलब ओक्लाहोमा WIC ले यस वस्तुलाई अनुमोदन गरेको छैन। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ WIC सुविधाहरू (खाद्य पदार्थ र सुत्र) को साथ यो खाना किन्न सक्षम हुनुपर्दछ, हामीलाई "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"यो अनुप्रयोगमा बटन।
अंग्रेजी WIC खाद्य सूची
स्वास्थ्य विभाग र वरिष्ठ सेवा वेबसाइट भित्र निहित सबै जानकारीहरू शैक्षिक उद्देश्यको लागि मात्र हो र निदान वा उपचारको लागि प्रयोग गरिनु हुँदैन। जानकारी डब्ल्यूआईसी पोषण र सम्बन्धित मामिलाहरु को समझ को लागी प्रदान गरीन्छ। उपभोक्ताहरूले मेडिकल सल्लाहलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन वा खोज्नमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन किनभने तिनीहरूले यो साइटमा देखेका हुन सक्छन्। पोषण विशेषज्ञ, चिकित्सक, र अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरू अन्य स्रोतहरू परामर्श र यस साइटमा निहित जानकारी पुष्टि गर्न प्रोत्साहित छन्। कुनै पनि गैर-सरकारी इकाई, उत्पादन, सेवा, वा जानकारीको स्रोत जुन यस साइटमा समावेश हुन सक्छ वा यसलाई ओक्लाहोमा स्वास्थ्य र वरिष्ठ सेवाहरूको विभाग द्वारा सिधा वा निहित रूपमा अनुमोदन ठानिने छैन। थप रूपमा, विभागलाई अन्य साइटहरूमा समावेश गरिएको जानकारीको लागि जिम्मेवार मान्न सकिदैन जससँग यसको वेबसाइट लि linked्क हुन सक्छ। यदि कुनै अपमानजनक जानकारी यी साइटहरूमा फेला पर्‍यो भने हामी तुरुन्त सूचनाको प्रशंसा गर्नेछौं ईमेल.